Ibhola Ukubheja Strategy | Express Ezemidlalo & Casino Ukubheja | Kuhle Amathiphu Online
Ibhola Ukubheja Strategy – Keep What you Win with Sports.expresscasino.co.uk
Ingabe 'oshiseka ezemidlalo' core kanzima ngubani ayelokhu eyifuna njalo ukubeka ngezikhathi ezithile 'Ukubheja', kodwa ngandlela-thile wazithola engazethembi nazo zonke izinkulumo mayelana kangakanani izingqinamba, iphuzu lisakazeka, bookies futhi sportsbooks iyahamba phezu kwekhanda lakho?
Uma yebo, ke uphumule. Sine nje ukuthi yini edingekayo ukuze unike uchwepheshe wena amasu ukubheja bese wena action-sesilungile nhlobo.
Awu, Ngithathe ukuqagela usuwazi world cup yayo isikhathi bathole indlela yakho ingxenye encane enhle ukubukela umdlalo. Ngakho, asonge, ubambe isiphuzo lifundeke.
Ukuze aphule izinto phansi futhi uqonde amasu kangcono, ake sibheke ezinye Balisebenzisa ukubheja Imibandela, ezifana 'imali imigqa', 'Ukukhubazeka' futhi 'iphuzu lisakazeka'.
A umugqa imali kuyinto ukubheja umugqa uchaza isizumbulu semali umdlali kumele ukugembula, ukuze uwine imali ithi $100. Ukunqoba ukubheja line imali, iqembu okungukuthi ukugembula nje has ukunqoba umdlalo. Ukufunjathiswa zakhelwe emhlabeni isinkiyankiya kweqiniso kunokuba evamile kangakanani izingqinamba fixed. Nokho, lemali ukuthi yenza umdlali angahluka kusuka umdlalo umdlalo, okusekelwe kangakanani izingqinamba ephakanyiswe.
Ake sibheke isibonelo ukuqonda izinto kangcono. Cabanga a esicabanga ukuthi kungaqhamuka football game lapho amaqembu amabili – Izintandokazi zami siqu nokuba Cowboys futhi Packers, adlala emelene nomunye NFL Championships.
Nakhu amathuba okuba ibukeke okwamanje:
Ibhola Ukubheja Strategy Blog Will Uqhubeka Ngemva Ithebula Ibhonasi ngezansi
Ngakho, ngasona lesi senzakalo; i-Packers ezisebenzayo izintandokazi – njengoba kuboniswa uphawu lokususa prefixing siphelela obungavamile 130, kuyilapho Cowboys zibhekwa underdogs – njengoba kuboniswa uphawu plus prefixing siphelela obungavamile 140.
Ngakho ku okuseduzane, lokhu kusho ukuthi abadlali abakhetha ukugembula izintandokazi, esimweni esinjalo, i-Packers, kuyodingeka engozini $130 zamaRandi ukuze uwine imali eliqinisekile $100. Ngokolunye uhlangothi, abadlali abakhetha ukugembula isinamumva noma kulokhu Cowboys kuyodingeka ingozi $100 ukuwina imali eliqinisekile $140.
Qaphela ukuthi, nakuba imali imithombe amasu ukubheja ethunyelwayo amayunithi $100, isidlali imahhala ayilwe isamba ongaphansi ke. Umugqa imali uyaqhubeka ukusebenza kanye imizila efanayo okuxoxwe ngazo ngenhla.
Igama ukukhubazeka e footballbetting kuyinto isu ukuthi izama ukwenza platform olinganiselayo futhi kuqondiswa ukudlala phakathi amaqembu amabili okungafani calibres '. In this method, Kusho ushintsho lwenziwa kangakanani izingqinamba esivuna underdogs yokuthi izintandokazi omkhulu umdlalo kufanele amaphuzu inombolo esingeziwe imigomo nasezinganeni no- izimbangi zabo. Lokhu kusiza ibhuloho esikhaleni ngisho ukuphuma amathuba okuba winner kweqiniso.
Igama iphuzu lisakazeka libhekisela ukukhubazeka ukuthi ibekwe phezu ithimba aphakeme ngokuya amaphuzu isikolo ngaphezu izinombolo ezihleliwe. Ake sicabangele isibonelo esifanayo lapho Cowboys kukhona izinja ngaphansi futhi Packers ahlale izintandokazi.
Uma Packers zibhekwa njengeziyisidala izintandokazi ngu 10 amaphuzu phezu cowboy, iphuzu ukusabalala isethwe njengoba 10. Ngakho, manje abadlali ukubheja ku ithimba Packers obuyokutholela ukugembula ngisho Packers ukuwina by 11 ukhomba noma ngaphezulu, phezu amaphuzu we Cowboys. Labo ukubhejela Cowboys umane uwine ukubheja uma ithimba labo noma iwina umdlalo noma ulahlekelwa ngu 9 amaphuzu noma ngaphansi.
Umphumela ungase futhi zigcine uthayi uma Packers ukuwina by beshaya kahle 10 amaphuzu. Esimweni esinjalo, Ngokuthembela enhlanhleni kuthiwa evened futhi imali eyabelwe.
Ibhola Ukubheja Strategy Blog Sports.expresscasino.co.uk. Gcina Yini wena ukunqoba!